वेद वाचनमा पोख्त सुन्दास दिदीबहिनी ! – Korea Pati
March 13, 2019 LeaveaComment on वेद वाचनमा पोख्त सुन्दास दिदीबहिनी !
मनिता सुन्दासका पूर्खालाई त अझै पनि धेरै मानिसहरुले अछुत नै ठान्छन् । जातिका आधारमा विभाजित समाजले उनीहरुका पूर्खालाई अछुत भनेर मंगल कार्यबाट टाढै राखे । तर, मनिता सुन्दासलाई अचेल हरेकका घरमा मंगल कार्य हुँदा वेदका ऋचा वाचन गरेर पवित्र बनाउन भ्याई–नभ्याई छ ।
जगमान गुरुङ भन्छन्– यिनीहरु ब्राह्मण हुन्
चतुर्वण्र्य मयातुष्टं गुणकर्म विभागसः’
ज्ञानका आधारमा संसारमा मानिसको पूजा हुने गरेको र ब्राह्मण जातका आधारमा नहुने उनले वताए । ‘जो ब्रह्म बुझ्ने हुन्छ, त्यो ब्राम्हण हो । यिनीहरु (सुन्दास परिवार) ले वेद पढेर ब्रह्म बुझेका छन् । त्यसैले यी ब्राह्मण हुन्’ गुरुङले भने, ‘त्यही भएर यिनलाई सबैले पुज्छन् । संसारको हरेक जीव एकै हो । बस उसको कर्मले उसलाई माथि तल बनाउँछ ।’
भिसा दुरूपयोग गरी गैरकानुनी तवरबाट अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा चिनियाँ नागरिकमाथि छानबिन
वीपी प्रतिष्ठानमा ‘लूट्न कान्छा लूट’ कहिलेसम्म ?